Monokini uwe eji egwu mmiri PDF ḷkwa Akwa Nlereanya – The Tailoress
Home / Women / Swimwear / Monokini uwe eji egwu mmiri PDF ḷkwa Akwa Nlereanya
Nke a Monokini bụ kpam kpam reversible na otú nwere ike abụọ dị iche iche na agba. All onuete kwesịkwara iburu n'uche na-ezo. Featuring n'akụkụ agbatị na ala na azụ na olu agbatị, na Monokini na-adị mfe gbanwee dabara.
SKU: 194 Categories: Swimwear, Women Tags: girl, monokini, n'oge okpomọkụ, igwu mmiri, igwu ejiji, uwe eji egwu mmiri, ndị inyom
Nkiti nkà Dị Mkpa:
overhand n'aka stitch
My nakawa etu esi na-pụrụ iche e mere na debara aha na-eme ka i nwee eme ka mara mma bespoke uwe.
Onye ọ bụla printable PDF ụkpụrụ abịa na a nso nke mmezi ihe ruru eru na-imewe na-enyere gị ka gị uwe elu a ọkachamara ọkọlọtọ.
– Soro a nzọụkwụ-site-zoo ndu na zuru ezu ihe oyiyi ahụ otú ọ bụla mpempe na-etinye ọnụ.
– Jiri extra gụnyere ozi n'ụzọ zuru okè rụchaa uwe gị.
– Chọta website maka mmezi support, (www.the-tailoress.com).
akwa akwa igwe
ballpoint n'aka na igwe agịga
1m 4 ụzọ gbatia lycra
3m 5mm obosara-agbanwe
Copyshop size: 57cm x 76cm
Be the first to review “Monokini uwe eji egwu mmiri PDF ḷkwa Akwa Nlereanya” Kagbuo zara
£4.15 Tinye na ụgbọ ibu